Abadlali bebhola baseAsia amabali obuntwaneni kunye namaNqaku e-Untold Biography
Ikhaya AMAZIKO E-ASIAN FOOTBALL
Abaqeqeshi bebhola baseAsiya bonke banamabali oBuntwana. I-LifeBogger ikuxelela la mabali, anamaxesha amaninzi angalibalekiyo amnandi kwaye achukumisayo.
Kutheni amabali obuntwana babaNgcali bebhola eAsiya?
Kutshanje, malunga nowama-2016, sabona isithuba esikhulu solwazi esikhoyo kwiwebhu. Yiyo inxulumene nokusilela komxholo okwaneleyo malunga nabaseAsia bebhola.
Ukuvala isikhewu, u-LifeBogger wagqiba ekubeni enze udidi lwase-Asiya, ngenjongo yokuhambisa amaNqaku oBantwana kunye neNzululwazi yeBhaybhile yabathandi bebhola kwilizwekazi.
Malunga noMxholo weBhola yethu yaseAsia
Amanqaku obomi beBogger agcina ukugeleza okunengqondo kuwo onke amabali awo. Ezi ngongoma zilandelayo ziya kukwenza ukuba uqonde ngcono umxholo wethu waseAsia.
Okokuqala nokuphambili, sikuzisa amabali obuntwaneni babadlali bebhola baseAsia, ukuqala ngexesha lokuzalwa kwabo, kumava abo obomi abancinci.
Sikuzisa ulwazi malunga nemvelaphi yoSapho kunye nemvelaphi / neengcambu zebhola laseAsia. Kwakhona, abazali babo (ootata kunye noomama).
Okwesithathu, sikuxelela imisebenzi yabo yoBomi baKudala kunye namava abo (abalungileyo okanye abangalunganga) obenza ukuba babone ukubizwa kwabo ngebhola.
Ibali liyaqhubeka nezinto ezenzeka kwiminyaka yabo yokuqala yobugcisa.
Okulandelayo yeNdlela yethu eya kuDumo. Apha, sichaza ukuba yeyiphi abadlali bebhola e-Asia ukuba baphumelele.
Ibali lethu leRise to Fame liqhubeka licacisa amabali abo okuPhumelela kunye nodumo lwangoku.
Siyahamba ke ukuya kukuhlaziya ngamabali abo oThando (amantombazana nabafazi).
Okulandelayo, ziinyani malunga noBomi bobuqu bebhola yase-Asia.
Iqela lethu ke liyakwenza ukuba uqhelane namalungu eentsapho zabo, kunye nolwalamano namalungu osapho kunye nezihlobo.
Okulandelayo ziZinto zoBomi, iNetworth kunye neMivuzo.
Okokugqibela, siza kukuzisela iinyaniso ezingachazwanga owawungazi ukuba zikho malunga neBhola yeBhola yaseAsia.
Ngamafutshane, sikholelwa ukuba Eli nqanaba linganceda izithuba zebhulorho kwisidingo sokuba nolwazi olwaneleyo malunga nabadlali bebhola baseAsia Amabali obuntwana kwaye Iinyani zebhayiloji. Ngombulelo, abalandeli beBhola ekhatywayo ngoku banokubukela umdlalo kwaye ngaxeshanye, bafundele amabali amangalisayo malunga nabadlali abaxhasayo.
I-LifeBogger ilwela ukuchaneka kunye nokuthe tye ngendlela ehambelanayo yokuhambisa iimpapasho zebhola. Ndiyacela Qhagamshelana nathi ukuba ubona nantoni na engakhange ilungele naliphi na amanqaku ethu.
Ngoku kuza amabali ethu ebhola laseAsia.
Abahleli boBomi beBogger - Umhla oLungisiweyo: nge-15 kaSeptemba ngo-2020
Abahleli boBomi beBogger - Umhla oLungisiweyo: nge-24 kaJanuwari ngo-2019 0
Abahleli boBomi beBogger - Umhla oguqulweyo: 22 Julayi 2018 0
Abahleli boBomi beBogger - Umhla oguqulweyo: Epreli 12, 2020 0
Abahleli boBomi beBogger - Umhla oLungisiweyo: nge-23 kaSeptemba ngo-2018 0
Abahleli boBomi beBogger - Umhla oguqulweyo: 23 Julayi 2018 0
Abahleli boBomi beBogger - Umhla oguqulweyo: 2 Julayi 2020 0
Abahleli boBomi beBogger - Umhla oLungisiweyo: nge-1 kaDisemba ngo-2019 0
Abahleli boBomi beBogger - Umhla oLungisiweyo: nge-18 kaDisemba ngo-2017 0
Abahleli boBomi beBogger - Umhla oLungisiweyo: nge-18 kaDisemba ngo-2017 2
Umhla oLungisiweyo: nge-9 kaSeptemba ngo-2020